ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြပါစို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြပါစို့
Posted by နွယ်ပင် on Sep 23, 2011 in Myanma News, News |5comments
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးမှာ မြစ်ဆုံဆည်ကြီး တည်ဆောက်နေတာကို မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးက ပြင်းပြင်းထန်ထန်
ကန့်ကွက်နေကြပါတယ် ။ တရုတ်ပြည်အတွက် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်တွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မြစ်ဆုံဆည်ကြီးဟာ တရုတ်အစိုးရပိုင် ကုမ္ပဏီများ ဆောက်လုပ်နေကြတာပါ ။ ကချင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ကချင်ပြည်သူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးက ပြည်သူတွေက ဒီဆည်ဆောက်လုပ်ရေးကို ရပ်တန့်ဖို့ တရုတ်နဲ့မြန်မာ အာဏာပိုင်များထံ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုနေကြတာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတဲကပါ ။ အခုဆိုမြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက နည်းမျိုးစုံသုံးလို့ ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေကြပါပြီ ။
” ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ရပ်တည်ရေးအတွက်ထိန်းသိမ်းေ၇းအတွက် အားလုံးကနေ စုစုစည်းစည်းလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီိ က်ိစ္စဟာကျမတို့ရဲ့ ညီညွတ်ရေးအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ညီညွှတ်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ကြပါ။ ကျမတို့အားလုံး ယုံကြည်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကိုအခြေခံပြီး ညီညွှတ်မှုယုနိုင်ရင် ကျမတို့အနေနဲ့တဖြည်းဖြည်း ညီညွတ်ရေးအခန်းကဏ္ဍဟာ များလာနိုင်ပါတယ် ” လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
‘ ကျွန်တော်အနေနဲ့ မြစ်ကြီးကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ကျမ်းမာစေချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ရှိခဲ့သလို ကျန်းမာတဲ့မြစ်တစင်းပြန်ဖြစ်စေချင်တယ်။ ” လို့လဲပြောခဲ့ပါတယ် ။
ဒီနေ့မှာလည်း နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) နှင့် ဧရာဝတီကို ထာဝရ ရှင်သန်စေလိုသူများ ပူးပေါင်းစီစဉ်သော “လူငယ်များရဲ့ဧရာဝတီ” အစီအစဉ်ကို မနက် (၁၀) နာရီကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ဒါကြောင့် မြန်မာလူထုရဲ့ တရုတ်အစိုးရအပေါ်မုန်းတီးမှုတွေ၊ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ်တွေက တနေ့တခြား ပိုကြီးမားလာနေပါတယ် ။ (၂၀- ၉- ၂၀၁၁)၊ နေ့လည် ၁း ၃၀ နာရီ ခန့်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ် (၉၄)၊ ခရေပင်လမ်းမှာ ရုံးစိုက်ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြန်ကြားရေးရုံးရှေ့မှာ တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလို နိုင်ငံရပ်ခြားက မြန်မာပြည်သူလူထုကလည်း မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပွဲအခမ်းအနားတွေကို ကျင်းပ ပြုလုပ်နေကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လဲ အစိုးရခေါင်းဆောင်အချို့ကတော့ လူထုအသံကို အရင်ကလိုပဲ မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုပဲ ကန့်ကွက်ပစေ၊ မြစ်ဆုံဆည်ကြီးကို ပြီးအောင် ဆက်ဆောက်မယ်လို့ ကြုံးဝါးနေသလိုပါပဲ ။
ဒါကြောင့် ဧရာဝတီဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အသ်ကသွေးကြောဖြစ်လို့ ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြပါစို့ … ။
ဒါကတော့ ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇူလိုင်က မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းမှ မြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံတွေပါ…
ဓာတ်ပုံ – ဒီမိုဝေယံ
အဆိုတော်ထူးအိမ်သင်၇ဲ. ”ရာဇ၀င်များ ရဲ.သတို့ သမီး ဧရာဝတီ” သီချင်းကို နားထဲမှာ ကြားယောင်
ဧရာဝတီ ဟာ ကျွန်မတို. အားလုံးရဲ. အသက်သွေးကြောပါ။
ကျွန်မတို. အားလုံးရဲ. မိခင် ဆိုလဲ မမှားပါဘူး။
အမေဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည် ရဲ့ ဧရာဝတီအတွက်ပန်ကြားချက်မှာဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
အခုတော့ အိုရုံတင်မဟုတ်တော့ဘဲ နာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါပြီ။
အချိန်မတန်ခင် မသေဖို့အရေး ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားကြရန်လိုအပ်မည်ဟုထင်ပါသည်။
နွယ်ပင် ရေးထားသလို မြန်မာလူမျိုးတွေ က တရုတ်အစိုးရအပေါ် သို့ လူမျိုး အပေါ်မုန်းတီးမှုဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ တကယ်တမ်း ဒီ project ကို လက်ခံခဲ့တာက ကျွန်တော် တို့ မြန်မာ လူမျိုး ကပဲလက်ခံခဲ့တာလေ။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့ ဘယ်လိုပဲ လုပ်လုပ် ကျွန်တော်တို့ လက်မခံရင် လုပ်လို့မှမရတာကိုဗျာ။ ကျွန်တော်တို့တကယ်မုန်းတီးတာက ဒီ အစီအစဉ်ကြီးပါ။ လူမျိုးရေးမုန်း တီးမှုလို့ပြောလိုက်ရင် ဒီ project လုပ်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေက လူမျုိးရေးမုန်း တီးမှုကြောင့် ကန့်ကွက်နေကြတာပါလို့ အကြောင်းပြလို့ရသွားမှာပါ။
လုပ်ကြပါဦး…..လွှတ်တော်မှာ မဲ ခွဲမယ်တဲ့….။